सूचना/प्रविधि – agrimnepal
मंगल ग्रहमा भेटिए मरेका कीरा
मंगल ग्रहमा मानिसको जीवनको सम्भावनासम्बन्धी वर्षौंदेखि बहस चलिरहेको छ। समयसमयमा मंगल ग्रहमा प्राप्त हुने प्रमाणको आधारमा वैज्ञानिकहरूले मानिसको जीवनको सम्भावनाबारे दाबी गर्दै आएका छन्। भर्खरै मंगल ग्रहमा वैज्ञानिकले एक रहस्य पत्ता लगाएका छन्। जसको कारण मंगल ग्रहमा जीवन हुने सम्भावना झन् बढेको छ। अमेरिकाको ओहायो विश्वविद्यालयका किट वैज्ञानिक र अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासासँग आबद्ध डा. […]
नेपाल टेलिकमले ल्यायो गिफ्ट प्याकेज योजना
काठमाडौँ- नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचिलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ। जसअन्तर्गत निश्चित दिनका लागि भ्वाइस वा डाटासेवा साथीभाइ वा आफन्तलाई उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। यो सेवा उपयोग गर्नका लागि सर्वप्रथम नेपाल टेलिकमको ‘Nepal Telecom’ एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्दछ । एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले […]
बूढाबूढी र बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनको असर
अहिले जलवायु परिवर्तन विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। वैज्ञानिकले आउने समयमा स्थिति झन् भयावह हुने बताएका छन्। अनुसन्धानका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी बालबालिका र बूढाबूढीको स्वास्थ्यमा यसको गम्भीर असर देखिनेछ। विश्वको तापमान बढ्नाले घातक किसिमका ब्याक्टेरिया बढ्ने, अन्नको उत्पादनमा पनि कमी आउने र मानिसमा कुपोषणको समस्या पनि बढ्ने खतरा देखिएको छ। अमेरिकामा हालै […]
भारतले चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयान ८७ दिनपछि भेटियो
वासिङ्टन : भारतीय कम्प्युटर प्रोग्राम तथा मेकानिकल इन्जिनियर सनमुग सुब्रमण्यमले जुटाएको प्रमाणमाथि अनुसन्धान गरेपछि अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा)ले विक्रम ल्याण्डरको अवशेष भेटिएको पुष्टि गरेको छ । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ले चन्द्रमामा पठाएको विक्रम ल्याण्डर सम्पर्क विच्छेद भएको ८७ दिनपछि भेटिएको हो । नासाले आफ्नो अर्बिटरबाट लिएका तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ विक्रम […]
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूदमा सहभागी खेलाडी, पाहुना, आयोजक, कर्मचारी तथा सहयोगीहरुलाई निःशुल्क फोरजी सिमकार्ड उपलब्ध गराएको छ। नेपाल टेलिकम साग खेलकुदको अवधि मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्मका लागि सागको पार्टनर स्पोन्सरको रुपमा यस्तो सेवा प्रदान गरेको टेलिकमले जानकारी दिएको हो । काठमाडौ, जनकपुर र पोखरामा खेलिने यस खेल महोत्सवमा सहभागी सम्पूर्ण […]
आजदेखि सूर्य मंगल राशिमा बस्ने यो दुर्लभ योग, यी राशी हुनेछन् मालामाल
(पूर्ण चन्द्र र अमवास्य कुण्डली ) मा बसेको हुन्छ । भूकम्प र राजनीतिक परिवर्तन भविष्यवाणीको सामाजिक परम्परा सूर्यको राशि परिवर्तनका आधारमा गर्ने पुरानो शताब्दीयौं देखिको तथ्य छ । तपाईं विभिन्न भाषाहरूमा यस्ता ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरू पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ ।तपाईंको राशिको प्रभावमा तपाईको राशिको प्रभाव हेर्नुहोस् । मेष राशिमा सूर्यले चौथो चरणमा प्रवेश गर्दैछ। यो यात्रा तपाँइको […]
२०१९ को अन्तिम सूर्यग्रहणमा कुन राशिलाई कस्तो असर
सूर्य ग्रहण लाग्नु भन्दा १२ घण्टा अघि शुरु हन्छ सुतक, यो नसकिंदा सम्म पूजा पाठ गर्न नहुने धार्मिक मान्यता छ । यसवर्षको २६ डिसेम्बरमा सूर्य ग्रहण लाग्छ । यो वर्षको अन्तिम ग्रहण हो । जीवन मन्त्रः २६ डिसेम्बर, विहिवार सुर्यग्रहण लाग्ने दिन हो । यो ग्रहण भारतको साथसाथै एशिया,अफ्रिका, र अस्ट्रेलियाबाट देख्न सकिन्छ । २०१९ […]
गत वैशाखमा तस्बिर लिइएको ब्ल्याक होल।गत वैशाखमा तस्बिर लिइएको ब्ल्याक होल। खगोलशास्त्रीहरूले मिल्की-वे आकाशगंगामा सोचेभन्दा निकै ठूलो ‘ब्ल्याक होल’ पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकहरूले यसअघि ब्ल्याक होलहरू सूर्यभन्दा बीस गुणासम्म ठूलो हुने अनुमान गरेका थिए। तर यो नयाँ ब्ल्याक होल सूर्यभन्दा ७० गुणा ठूलो भएको चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेसले जनाएको छ। नेचर जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनअनुसार यो […]
एजेन्सी। तपाईको उमेर २० वर्षको हुँदा २० हजार करोड सम्पत्तिको मालिक हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ? महलमा राजकुमारको रुपमा आलीशान जिन्दगी विताउन हुन्छ होला त्यति भए त के चाहियो र !भारत जयपुरका ‘राजा’ पद्मनाभ सिंहको जीवनशैली देखेर शायद तपाईलाई यसको झलक प्राप्त हुन्छ । राजकुमारी दिया कुमारी तथा नरेन्द्र सिंहका छोरा पद्मनाभ जयपुरका सबैभन्दा युवा […]